सुर्खेतका बाढी पीडितका दुःख, ‘न बने घर, न पाइयो राहत’ – Mission
सुर्खेतका बाढी पीडितका दुःख, ‘न बने घर, न पाइयो राहत’
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, साउन १३, २०७७
दिनेश कुमार बुढा । सुर्खेत ।
‘हेर्दाहेर्दै घरमा बाढी पस्यो । धनमाल क्षति भयोे । पुरै गाउँले विस्थापित भए । एकैछिनमा सयौं जना घरबार विहीन भए ।’ बाढी पीडित ६७ वर्षीय कौशिला नेपालीलाई साउन महिना लाग्ने हुन्न । आज भन्दा ६ वर्ष अघिको कालो दिनको झल्को आउँछ । त्यो भयानक घटना । कोलाहल वातावरण । त्यो भयानक स्थिति उनी सम्झिनै चाहन्नन् । तर जब जब साउन महिना लाग्छ । त्यो कालो दिनको सम्झना झल्झली आउँने गर्दछ । विगत ६ वर्षदेखि पालको बास भएकी उनले राहत पर्खेको वर्षौ भयो । उनी वि.स. २०७१ साउन २८ र २९ गतेका दिन अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीबाट प्रभावित हुन् ।
त्यो साल आएको बाढीले सुर्खेतका केही स्थानीय तहका नागरिकहरुलाई पूर्ण रुपमा घरबार विहीन बनाएको थियो । त्यही बाढीमा परि धेरै घरपरिवार विहीन भएकाहरु अहिले पनि अस्थायी रुपमा टहरा बनाएर बस्न बाध्य छन् । त्यही बाढीका पीडितहरु अहिले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने गिरीघाटमा हटरा बनाए बसिरहेका हुन् । ४५ वर्षीय एक बाढी पीडित रुपलाल विक भन्छन्, ‘दिउँद आयोे, चिसोले हैरान हुन्छ ।
गर्मीयाममा उखरमाउलो गर्मीले बस्न खान दिदैन । ६ बर्षदेखि यसरी नै बस्दै आएका छौ ।’ उनका अनुसार ६ वर्षदेखि बेवारिसे रुपमा बस्दै आएको भएपनि कसैले सहयोग गरेका छैनन् । घरबिनाको बसाइँ निकै कष्टकर छ । अर्का स्थानीय विरे वनको पनि दुःखेसो उस्तै छ । ‘संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार छन् । ती सबै हुने खानेहरुका लागि मात्रै रैछन् । हामी जस्तो हुँदा खानेहरु र दुःखीकोको कोही पनि रैन रैछ । सरकार हामी कहिले गर्मीले सताउँछ । कहिले वर्षाले सताउँछ ।
सरकार, बाँचौ कसोगरी ।’ मिसन टुडे दैनिकसँगको कुराकानीको क्रममा उनले भने । देशमा सरकार भएको अनुभूति आफूहरुले कहिल्यै पनि गर्न नपाएको उनले बताए । गिरीघाटमा अहिले रानिघाट, थापाडेरा, सिस्नेरी र डोक्काबाट आएका करिब दुई सय घरधुरी बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । साँझ विहान के खाने, के लाउने, बालबच्चा र बृद्धबृृद्धा बिरामी परेका बेलन निकै समस्या हुने गरेको बाढी पीडित विष्णु नेपालीले गुनासो सुनाइन् ।
बाढी आएको केही समयपछि केही एनजिओहरुले सहयोग गरेपनि अहिले कसैले पनि सहयोग नगरेको उनको भनाई छ । उनी भन्छिन्, ‘बाढी घरबार विहीन बनायो । घर बग्यो, सम्पत्ति सबै पानीमा मिसियो । ६ वर्ष भइसक्यो । अझै पनि घर पनि बनेन । क्षतिपूर्तिक स्वरुप राहत समेत पाइएन ।’ यता गिरीघाटमा बसेका बाढी पीडितहरुलाई जग्गा भएका र जग्गा नभएका गरी दुई वर्गमा विभाजन गरिएको प्रदेश सभा सदस्य बिन्दमान विष्टले बताए ।
उनका अनुसार जग्गा भएका घर मात्र बनाइदिनु पर्नेलाई दोस्रो किस्ता सम्म प्रदेश सरकारले पैसा दिइसकेको छ । अन्य बाढी पीडितका घरहरु निर्माणको प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए । ‘जग्गा पनि नभएका घर पनि नभएका जो छन् । उनीहरुलाई जग्गा किन्नको लागि थप दुई लाख पैसा र घर बनाउनको लागि तिन लाख पैसा दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छ । यो वर्ष सबै सम्पन्न हुने गरि कामहरु भइरहेको छ ।’ उनले भने ।
उक्त बाढीले सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–५ तिखाकुनाका १३ जना नागरिकको ज्यान लिएको थियो भने भेरी नदी उर्लिएर गाउँ भित्रै बाढी छिरेपछि ९६ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । त्यही बाढीमा एक सय १४ घरधुरीको चार सय एक रोपनी खेती योग्य उर्भर भूमि बगरमा परिणत समेत थियो ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, साउन १३, २०७७ 8:48:07 AM |
Posted in प्रदेश नं. ६, मुख्य समाचार, समाचार, साहित्य
Prevसम्पादकीय : बाँकेमा फेरी जोखिम बढ्दो ?
Nextआत्महत्या गरेका युवकमा कोरोना पुष्टि